I-china Intelligent Touchless Automatic Soaming Dispenser abakhiqizi nabaphakeli | Zhaolong
Samukela i-oda elincane, ungacela imininingwane kumthengisi wethu.
Yonke imikhiqizo yethu iwaranti yonyaka ongu-1.
Uma kukhona isitoko esitholakalayo, izimpahla zingathunyelwa zingakapheli izinsuku ezintathu.
Uma singekho isitoko, izimpahla zingathunyelwa cishe emavikini ama-2-3.
I-oda le-OEM ne-ODM
Samukela i-OEM oda, vele usithumelele ukwakheka kwakho kokupakisha, singakusiza ukuthi wenze i-logo yakho nokupakisha kwakho. Sine-R & D yethu siqu, i-ODM oda eyamukelekayo futhi.
Singakunika amasampuli wokuhlolwa ngaphambi kokufaka i-oda elisemthethweni.
Amasampula angathunyelwa zingakapheli izinsuku eziyi-1-5 ngokuya ngobuningi besampula nesimo sesitoko sethu.
Singanikela ngokuthunyelwa nge-express yamazwe aphesheya (i-TNT, i-UPS, i-DHL neFedEx), ngendiza nangolwandle.
Mayelana Nezinto Zomkhiqizo
Sihlala sinamathela ekusebenziseni izinto eziphephile ngebanga lokudla, elingenabo ubuthi kanye ne-free-phthalate.
Asikwazanga kuphela ukuhlinzeka ngewebhusayithi yokusesha nenombolo yesitifiketi, kepha futhi sikusize ukwenza ukuqinisekiswa kwesitifiketi.
Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi & QC Management System
Sine-IQC (Ukulawulwa Kwekhwalithi Engenayo), i-PQC (Ukukhiqiza Ukulawulwa Kwekhwalithi), i-IPQC (Input Process Quality Control), i-LQC (Line Quality Control) ne-FQC (Final Quality Control).
Ungajabulela lezi zinsizakalo:
1. Mayelana nomkhiqizo wethu, singanikeza amakhasimende isiqinisekiso sonyaka owodwa.
2. Sivakashela ukulandelela amakhasimende ethu njalo ukuthola impendulo ebalulekile.
3. Uma unanoma yimiphi imibuzo ngesikhathi sokuhlinzwa, sizokusiza ukuthi uyithole ekuqaleni.
Ngokushesha nge-2.5s infrared sensor
Isihlanzisi esinamagwebu aminyene
Gcina amagciwane etholakala
KUFIKA KWEZINYANGA EZIMBILI ZOKUSETSHENZISWA (ngomthamo omkhulu ongu-220ml / 7.5oz)
Langaphambilini Izingane zasendlini ezihlakaniphile zokungeniswa kwe-foam yokugeza insipho
Olandelayo: Ithebula elimi ngesandla elinamagwebu alithinti okokuhambisa okokufaka amagwebu okuzenzakalelayo